छोरा आर्यनलाई जेलवाट बाहिर ल्याउन आमा गौरीले गरिन् यस्तो भाकल, शाहरुखले भने ‘अब मेरो घरमा कोही नआउनु’ - Khabar Nepali
बिहिबार, मङि्सर १६, २०७८
होमपेज / मनोरञ्जन / छोरा आर्यनलाई जेलवाट बाहिर ल्याउन आमा गौरीले गरिन् यस्तो भाकल, शाहरुखले भने ‘अब मेरो घरमा कोही नआउनु’
छोरा आर्यनलाई जेलवाट बाहिर ल्याउन आमा गौरीले गरिन् यस्तो भाकल, शाहरुखले भने ‘अब मेरो घरमा कोही नआउनु’
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको घरको माहौल धेरै निराशाजनक छ। शाहरुख खान सहित गौरी खान पनि फोन मा लगातार ब्यस्त छन्। कानूनी विशेषज्ञहरु र नजिकका साथीहरु संग कुरा गर्दै उनीहरुले सुझाव लिइरहेका हुन्छन् । वास्तवमा, आर्यन खान ड्रस को मामला मा क्रूज पार्टी बाट पक्राउ गरीएको थियो। यद्यपि आर्यनबाट ड्रग लिएको भेटिएको भने थिएन । उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स म्ब न्ध भएको आरोप लगाइएको छ । ब
आर्यन खानलाई जमानत पाउन गाह्रो भइरहेको छ। एनसीबी र आर्यन खानका वकिलबीच लामो बहस भयो। अक्टोबर १४ मा भएको सुनुवाई पछि अदालतले सुनुवाई २० अक्टोबर सम्मका लागि स्थगित गरेको छ। लामो बिदाका कारण यस्तो भएको हो। शाहरुखका पारिवारिक साथीहरु बताउँछन् कि दुबै प्रत्येक दिन चिन्तित हुन लागेका छन्। साथीले भन्यो कि गौरी खानले आर्यन खानको लागी भाकल मागेकी छिन्। यस संगै, उनी लगातार नवरात्री को अवसर मा प्रार्थना गरीरहेकी छिन्। उनीहरुले चाडपर्वको शुरुदेखि नै मिठाई र चिनी खाएका छैनन्।
शाहरुख खानकी म्यानेजर पूजा ददलानीले पनि दुर्गाको फोटो इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी छिन्। यो उनले अक्टोबर १४ मा सुनुवाई अघि सार्वजनिक गर्दै लेखिन् धन्यवाद माता रानी। यस अवसरमा शाहरुख खान र गौरी खानले सोचेका थिए कि आर्यन खान जमानत पाउनेछन् र उनी भोलिपल्ट जेलबाट बाहिर आउनेछन्, तर यस्तो भएन। दुबै जना निराश भए।
यस बाहेक, शाहरुख खानले आफ्ना सेलिब्रिटी साथीहरुलाई मन्नतमा धेरै पटक नआउन भने। सलमान खान शाहरुखको घरमा तीन पटक पुगेका छन्, जो उनको छिमेकी पनि हुन्।
जब अमिताभ बच्चनको झूट जया बच्चनले समातिन्, दुखी हुँदै भनिन् ‘मलाई यस्तो पटक्कै राम्रो लाग्दैन’ (भिडियो हेर्नुस्)
कट्रिनाले आफ्नो विवाहमा के सलमानलाई निम्ता दिइनन् ? सलमानको बहिनी अर्पिताले खोलिन् रहस्य
म’र्छु भनेर हिंडेका कलाकार शंकर आचार्य ‘वरिष्ठे’ यसरि भाग्यले बाँचे (भिडियो सहित)
पहिलोपटक सार्वजनिक गरे अक्षयले आफ्नो बडीगार्ड, उनको खुवी यति सम्म रहेछ जुन अक्षयले नै गरे खुलासा (भिडियो सहित)
शाहरुख खानकी छोरीको दिल किन टुट्यो ? यस्तो पोष्टले बलिउडमा तरंग
कट्रिना विक्कीको बिहेमा आउन यस्ता सर्त पुरा गर्नुपर्ने भएपछि रिसाए पाहुना, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने
४.‘टिकटक क्विन’ रेश्माको विवाहमा वर्षाको रमाइलो, को को पुगे विराटनगर ?
६.यिनै हुन् जो जहाजको ल्या’न्डि’ङ गि’यरमा बसेर ग्वाटेमालाबाट अमेरिका पुगे
७.पहिलोपटक सार्वजनिक गरे अक्षयले आफ्नो बडीगार्ड, उनको खुवी यति सम्म रहेछ जुन अक्षयले नै गरे खुलासा (भिडियो सहित)
८.करियरको सफलताको लागि १० प्रेरक भनाइहरू